Daboolida Mootooyinka istaaga iyo kuwa guurguura
Gawaarida mootadaani waxay si fudud u dhigan karaan mootooyin kala duwan oo barokac ah, waxay ka ilaalin karaan gaarigaaga boodhka, carada, ciida, roobka, barafka, iyo dabaysha, waxayna ka hortagi karaan shisheeyaha inay taabtaan oo wasakheeyaan saxarada xoolaha. Waxaa si joogto ah loogu dhejin karaa dhul fidsan ama trailer ah, oo leh muuqaal quruxsan iyo xargo
Mootada Wareegta ee Gawaarida Daboola
Daboolida Mootadani waxay si fudud u dhigan kartaa mootooyin kala duwan oo yar-yar iyo kuwa dhexdhexaad ah, waxay ka ilaalin karaan gaarigaaga boodhka, carada, quruuruxa, roobka, barafka iyo dabaysha, waxayna ka hortagi karaan shisheeyaha inay taabtaan iyo wasakheynta saxarada xoolaha. Muuqaalku waa mid fudud oo muuqaal leh, oo leh dareen xoog leh oo tiknoolaji ah.
Gawaarida dab-damiska ee taangigeenna waxaa lagu beddelay Dongfeng EQ1041DJ3BDC chassis. Gaarigu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: qaybta rakaabka ee dab-damiska iyo jidhka. Rakaabka rakaabka waa saf laba jibbaaran oo asal ah wuxuuna qaadi karaa 2 + 3 qof. Gaarigu wuxuu leeyahay qaab taangi ah oo gudaha ah.
Gaariga hawlgalka joogga sare leh wuxuu leeyahay faaiido aysan qalabka kale ee shaqada hawada isbarbar dhigi karin, taas oo ah, wuxuu sameyn karaa howlo fogfog waana mid aad u guuritaan badan, kana kala wareegaya magaalo magaalo kale ama xitaa dal. Waxay ku leedahay boos aan la beddeli karin howlaha degmada.